Archive du 20181105
Fifidianana 7 novambra Azo antoka ny fandresen’i Dada
Feno hipoka ny Kianjaben’i Mahamasina ny sabotsy lasa teo. Rakotra vahoaka na ny «gradin », « tribune », ary ny teo afovoan’ny Kianja. Porofoin’ny vahoaka hatrany ny fitiavany sy ny fanohanany amin’ny hery rehetra ny Kandida laharana faha-25 Marc Ravalomanana,
Depiote Clarisse Rasendramiadana “Aza kivy mitady kara-pifidianana.”
Nanateran’ireo mponin’ny boriborintany fahadimy hiandraiketany fitarainana mikasika ny tsy fahitana kara-pifidianana sy ny tsy fahatomombanan’izany koa ny depiote Clarisse Rasendramiadana raha ny tatitra nataony teny Nanisana omaly.
Fifidianana filoham-pirenena malagasy 2018 Tsy hanam-paharoa
Tapa-bolana mialoha ny andehanan’ny fihodinana voalohany amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena dia efa nisy kandida miisa 25 be izao sahady, nivondrona.
ANTOKO OTRIKAFO Azo hatao tsara ny manao fifidianana, tsy ampian’ny any ivelany
Naneho ny heviny mikasika ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny indray ny antoko Otrikafo ny faran’ny herinandro teo.
Fiatrehana ny fifidianana Tsy tokony hisy ahiahy intsony…
Miantso ny olom-pirenena ho tony ny vaomiera misahana ny fikarakarana ny fifidianana amin`izao ankatoky ny fifidianana izao ka manentana ny olona hanefa ny adidiny amin`ny 7 novambra ho avy izao.
1er tour dia vita Fepetra 5 no fenoin`ny kandidà dia tanteraka
Niakatra ny maripana politika ny faran`ny herinandro lasa teo fa nifanesy ny faradoka nataon`ireo kandidà ho filohan`ny Repoblika.
Andry Rajoelina Tompondakan’ny fampanantenana poakaty
Rehefa narahana akaiky ny fomba firesaky ny kandida laharana faha 13 Andry Rajoelina nandritra ny fampielezan-kevitra dia mazava fa tena ilay filohan’ny tetezamita nanao ny lalàmpanorenana kitoatoa tamin’ny 2010 sy nitarika ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009 marina no miresaka.
Rajoelina namotika firenena Tsy hanaiky diso mandrakizay…
“Tamin’ny 2008 dia nahatratra 7,5 ny fitombon’ny harinkarena ary tamin’ny 2009 dia niiba satria 3% ary mazava amin’izany hoe inona no nampirongatra ny tsy fandriampahalemana ?”, hoy ny kandida Marc Ravalomanana tamin’ilay adihevitra tao amin’ny fahitalavi-panjakana TVM.
Fahasimban’ny tontolo iainana eto Madagasikara Ny fahantrana no tena antony
Ny fahantrana lalin’ny Malagasy no tena antony mahapotika isan’andro isan’andro ny tontolo iainana. 73% no miaina anatin’ny tsy fahampiana ary maherin’ny 80% ny any amin’ny tontolo ambanivohitra no miankina tanteraka amin’ireo zava-boary avy amin’ny tontolo iainana.
Mialy Rajoelina Malok’endrika tampoka ny sabotsy teo
Maro no nahatsikaritra ny sabotsy hariva teo ny endri-dRamatoa Mialy Rajoelina, izay hita ho tena vinitra dia vinitra nandritra ilay fandaharan’ny haino aman-jerim-panjakana ka nampihaonana ireo kandida ho filoha 6, andiany farany.
Fifidianana filohan’ny FMF Tsy raikitra fa nisavorovoro indray
Tsy tontosa ny fifidianana filohan’ny FMF “Federasion’ny Baolina Kitra Malagasy” saika notontosaina ny sabotsy 3 novambra teo tany Sambava Faritra SAVA noho ny tsy fahatrarana ny fetrisa 2/3-n’ny mpifidy tokony hanatanteraka izany.
Kandida Neypatraiky Nisintona tsy hofidiana intsony
Anisan’ireo kandida nanatri-maso ny zava-nisy tany Sambava Atoa Neypatraiky Rakotomamonjy izay nanambara fa tena nampalahelo ny zava-nisy tamin’iny sabotsy 3 novambra iny fa betsaka ny zavatra nifamahofaho. Anisan’izany,
Kitra-Filohan’ny Ligin’Analamanga Nosamborin’ny mpitandro ny filaminana teny Ivato
Nosamborin’ny mpitandro ny filaminana vao maraim-be tamin’ny 6 ora tany ho any ny sabotsy 3 novambra teo raha handeha hihazo an’i Sambava hanatrika ny AG sy fifidianana izay ho filoha vaovaon’ny FMF ny filohan’ny ligin’ny baolina kitran’Analamanga, Rakotoarimanana Tôta Henintsoa.
Edito Tsy voavidy vola !
« Tsy voavidy vola ! ». Nanakoako eraky ny lalana namonjy ny fodian’ny kandida ho filoham-pirenena iray nihazo an’iny Ambohijatovo sy Ambohidahy iny izany hiakan’ireo mpanaradia azy izany ny sabotsy tolakandro teo.
Tsy tahotra tsy henatra intsony fa atao ampahibemaso omaly ny fizaram-bola nataon’ny depiote Mapar iray tetsy Analamahitsy sy ny manodidina.